Mon Mon Tsang, onye isi oche nke OutMarket
Edemede site na Mon Tsang
Mon Mon Tsang bụ CEO nke Mlọ ahịa. OutMarket na-enye ngwanrọ akpaaka ahịa na ọrụ maka ndị na-ere ahịa iji chụpụ nsonaazụ ọnụọgụ.
Na Mọnde, Nọmba 4, 2014 Mon Tsang
Maka ọtụtụ ndị na-ere ahịa, nkwa nke ahịa akpaaka ngwọta yiri ka enweghị ike ịnweta. Ha dị oke ọnụ ma ọ bụ sie ike mmụta. Akwụsịrị m akụkọ ifo ndị ahụ na ọtụtụ ndị ọzọ na akwụkwọ akụkọ “Modern Marketing Manifesto” nke OutMarket. Taa, Achọrọ m ịhapụ akụkọ ifo ọzọ: ịzụ ahịa akpaaka bụ bọmbụ ọlaọcha. Imejuputa akụrụngwa akụrụngwa agaghị eme ka njikọta na mgbanwe gbanwee ngwa ngwa. Iji mezuo nsonaazụ ndị ahụ, ndị na-ere ahịa ga-ebuli ma akpaaka ahịa ha na nkwukọrịta ha. Optimization nwere ike chere na nke